Ngaba ndinokukhawuleza ukuthabatha amazwi angundoqo ama-Amazon asebenzayo?
Nalu uluhlu olutshanje lwezixhobo ezine eziphambili ze-Amazon zegama elikhethiweyo elisebenzayo. Ngezantsi ndiza kukubonisa i-AMZ Tracker, i-Keyword Inspector, i-Scope, ne-Unicorn Smasher. Ndiye ndavavanya ngamnye wabo, ngoko ndiyathemba ukuba bonke basebenzise-baqinisekisiweyo.
I-Amz Tracker mhlawumbi ithuluzi elihle lokulandelela kunye nokufumanisa i-intellectual word product. Esi sixhobo siza kuba luncedo kakhulu kubathengisi be-novice, kunye nabahwebi bezentsebenziswano baye basebenza ngaphaya kweminyaka emibini. Kuthetha ukuba ukusebenzisa i-AMZ Tracker awukwazi ukulandelela kuphela amagama angundoqo aphezulu asetyenziswa ngabathengisi ngaphaya koko, kodwa unokubona nokuba yiyiphi na kwaye ubuninzi bakho abakhuphisana nabo abasondeleyo. Ingakumbi - esi sixhobo sihamba ngaphaya kwegama le-Amazon lemveliso yegama elifanayo, njengokuba kuluhlu lwe-Onbuilt On-Analyzer lwe-inbuilt yakho uza kuhlala unendawo yokuphucula uluhlu lwemveliso yakho. Ekugqibeleni, ukuba kuboniswe phezulu kwento efanelekileyo yokukhangela kwi-Amazon.
Umhloli wegama elingundoqo
Umhloli wegama elingundoqo akuyona nje isixhobo esisodwa sokusebenza kwii-keywords ze-Amazon. Enyanisweni, i-suite epheleleyo yezinto eziphambili zophando lwegama elingundoqo, njenge-Reverse ASIN yegama elingundoqo elingundoqo (iziphakamiso zegama eliphambili elithile njenge-ASIN iinqanaba), i-Keyword Trends Tool (umthengi igama elingundoqo, umkhiqizo othengiweyo ophezulu kunye neziphakamiso zokukhangela ezihambelanayo), i-Tester Indexation (ngokukhawuleza. -inkqubo enokuyenza ukuba uqinisekiswe ukuba uluhlu lwemveliso yakho lubonwa kakuhle ngabaphulaphuli beemakethe), i-Amazon Suggestions Tool (khangela uphendlo lwegama elide lithemba kunye neentetho zokukhangela ezicetyiswayo kuphela), kunye ne-Amazon Search Terms Optimizer Tool (ukuphucula ukuveliswa kwemveliso yakho kwi-intanethi).
Uluhlu linye ithuluzi elincedo lokukunceda ngokuphanda ama-keywords e-Amazon. Phakathi kwamacala aso anamandla, esi sixhobo sinceda kakhulu ukubona i-key-performing keywords ephakamileyo kwiimarike ezichasene nazo. Ukongezelela, Uluhlu lunokukunceda ufumane amanye amagama athile athembisayo okwangoku athola ukuthandwa kwaye uphakanyiswe nawe. Ekugqibeleni, esi sixhobo sikhulu kakhulu xa kufikelelwe kuphuhliso lwephulo lwePPC, kwaye ukukhangela amagxala anenzuzo kakhulu ngaphakathi kokuncintisana okuncinci. Yaye ugcine engqondweni, ukuba esi sixhobo sinokukunceda ngokufanayo ukwenza izinto zibe lula kwaye zikhuseleke ngokuqinisekileyo-nangendlela yokulawula umngcipheko, uMmandla ungakubonisa ukuba uqikelele ngeniso yenyanga, ukuthengiswa kwexabiso, kunye nenzuzo enokuthi ilindeleke emva kwe-FBA (Ukuzaliswa ngu-Amazon ) iindleko.
I-Unicorn Smasher igama elibi ngokwenene lokwenza okulandelelweyo ukusebenzela kwii-keywords ze-Amazon zamagama, kodwa isazi saziwa njengesixhobo esifanelekileyo sokuqala ukubusa phezu kwayo. Kuthathwe ngokubanzi, esi sixhobo sonke siyakunceda ngohlalutyo olubanzi lweenkcukacha kumaxabiso, kwii-rankings ezithengisa kakhulu, ukuqikelela ukuthengiswa, ukuhlolwa kwabaxhasi, ukuphathwa okulula, kunye nokulinganiswa kwengeniso kwangoko. Sebenzisa i-Unicorn Smasher ukulibala malunga nokuqaphela okungahleliweyo unyanzelekile ukuba wenze kanye kunye.